Gatii qalbii sareen gabaa dhaqxe,ulee dabalatti! Dhaabni maayi hin qabne,kan salphina hin beekne,kan Qeerroo Oromoo waliin quba wal hin qabneefi kan maqaa qabsoo Oromoo Qeerroon finiinsee uummatasaa Oromoo mara biyya keessaa hirmaachisaa jirutti dhaabota Ormaa abbaa taasisuuf deemtu dhaaba qalbii saree qabdu ODFf……Noolee Buttaa irraa – Beekan Guluma Erena
Gatii qalbii sareen gabaa dhaqxe,ulee dabalatti! Dhaabni maayi hin qabne,kan salphina hin beekne,kan Qeerroo Oromoo waliin quba wal hin qabneefi kan maqaa qabsoo Oromoo Qeerroon finiinsee uummatasaa Oromoo mara biyya keessaa hirmaachisaa jirutti dhaabota Ormaa abbaa taasisuuf deemtu dhaaba qalbii saree qabdu ODFf……Noolee Buttaa irraa	Beekan Erena
Politics Category November 2, 2016Oromo Revolution
Gatii qalbii sareen gabaa dhaqxe,ulee dabalatti!
Dhaabni maayi hin qabne,kan salphina hin beekne,kan Qeerroo Oromoo waliin quba wal hin qabneefi kan maqaa qabsoo Oromoo Qeerroon finiinsee uummatasaa Oromoo mara biyya keessaa hirmaachisaa jirutti dhaabota Ormaa abbaa taasisuuf deemtu dhaaba qalbii saree qabdu ODFf……Noolee Buttaa irraa
Dhaaba jedhanii waamuunuu kan qaanii fi afaan keechaa nama ba’uuf nama rakkisu gartuun Adda Diina Oromoo (ODF) Obbo Leencoo Lataatiin durfamu akkuma saree ta’uudhaan bara meeqa salphina uffatan! Dhaaba kanatti dhufuu isaaniitiin dura ani umurii waggaa shanii hanga torbaa utuu hi ga’inin dhaaba yeros obbo Leencoonfaa keessa jiraniifi maqaa dhaaba ABO jedhamu waliin wareega baasuu eegale har’a ani dargaggeessa waggaa 29 xumuree 30ffaa qabatu kanin ta’u, ji’a Muddee dhufu keecha.Obbo Leencoofi hiriyooti isaa umurii kana keessatti mana meeqa akka lixaniifi waa meeqa qabsaayota Oromoo jeeqanii akka jeeqamanii fi akka dhibamaa ta’an isaanii fi hiriyoota isaaniifin dhiisa!
Ani jibba nama dhuunfaa ykn gurmuu kana irraa hin qabu, garuu adeemsi ODF waan sochii Qeerroo fi uummata biyya keessaa wajjin hin adeemneef dhaabi kun maalif akka akkas waaroo salphinaa uffachuun isa mararu irratti waan anatti fakkatu barreessuu barbaadeeni!
Adeemsi Adda dimokiraatawaa Oromoo xinsammuudhaan olola fi waraana Habashootaan mo’amuu agarsiisa dhiyeenya kana qoosaa siyyaasaa Qaannqee Shaw irratti obbo Leencoon dhiyootti qaamni karaarraa jedhaa jedhu yoo dhufe kararraa jechuuf nuti qqophiidha jedhan.As irratti obbo Leencoo fi ODF Qeerroon Oromoo karaarraa nuuf jedhaa firri haamilee isin cabsuurraa,alagaan olola isinitti banuurraa sagantaa jijjiiraa utumua jettanii akka bishaan gabateerraa kan fokkistan kana keessaa akka bataniif qabsoo nuuf dhiisaa ittiin jechuuf qabsoo Qeerroon geggeechu gayaadha malee,xalayaa itti erganii ykn immoo akka TPLF Agaazin itti bobba’ee karaarraa akka isaan qabutti eeguun dadhabina.
Yaa ODF garmaammin fardaan tola,guddinni lammiin tola” kan jedhan maaliif dagattu? Alagaa wajjin hidhachuun mootota Yajjuu maal fayyadee? Habashooti aangoo waliif akka oo’an Oromoo irratti akka jibban,walii isaanis aangoo irratti akka inaafan utuu beektanii ganda ormaa maaliif deemtanii? Qabsoo Oromoo ABOn adeemsisu irratti “As Osloo taa’ee waa’ee qabsoo hidhannoo haasawuu hin danda’u” jechaa kan turan hayyu dureen keessan akkamiin G7 kan hidhann ootti amanu wajjin hojjechuu dandeessuu? Gaaffiidhuma kana obbo Leencoo Baatiin “kan aanjawetu fi kan mijaawutu hojjetama malee qabsoo kanatu ykn sanatu balfama miti” jechuun VOA irratti dubbattanii jiru.Yoos maaliif ABO wajjin hojjechuu dadhabdan?
Waggaa darbe dhimmi Oromoo Matakkal Wambaraa marsaalee hawaasaa irratti yeroo ka’e,nuti ilmaan Oromoo wara Oromiyaa alatti argaman kanneen akka kanaatu jechuun Matakkal Wambaraatu sagantaa qabsoo keenya akka jijjiiru nu taasisa jechuun mata duree falmii taasisuun miseensoti ODF yaada hawaasaa hatuuf aanti taasiftan marti isinii hin milkoofne.
Amma isinii fi hordoftoonni keessan salphinni keenya hangamitti deemeera Jettanii wal gaafattanii beektuu? Qeerroofi Hawaasi Oromoo biyya keessaa gurra isaatiin Xoophiyaa sobaa fi kan har’as ilmaan Habashootaa Oromoo keessatti ijaaruuf dheebotan kana keessatti Oromoon raawwatee ijaaramuuf fedhii hin qabu! Oromoon qabsoo karaa kamiinuu geggeessu Xoophiyaa diigee Oromiyaa biyya taate ijaarudha kanaaf immoo daa’ima bulguudhaan sodaachisu akka jedhan diinatu Oromootti baay’ata jechuun sodaachisa afarsitan lafa keessanii qabsoo Qeerroon geggeessutti karaa salphaa ta’een ofii keessanirra alagaa illee abbaa itti taasisuuf sochii kamiinuu geggeessuuf haamilee isaa hin qabdani! ODF jechuun salphoo salphina hin beeknedha!
Falli keechan maalii?
Akka dhaabatti hawaasa Oromootiif ni dhaabbanna yoo jettan, jalqaba barcuma ulfinaa of jala dhaabbadhaa! Barcumni ulfinaa kunis waan dhaabbata amantii keessaa fudhattan miti sagantaafi tarsiimoo siyyaasaa dantaa uummata Oromoo eegsisuu malu qabaachuudha!
Yoo gurra qabaaattan,Qeerroo Oromoo tumsaa waraana Oromoo fi dhaabota siyyaasaa Oromootiin wallitti ititaatii waraanas itichaa! Kan itti aanu,Qeerroo biyya keessaa ilaalcha siyyaasaa qabdan irratti hirmaachisaa! Sanuu bakka dhalootaa fi sagantaa amantii irratti amantanirraa walaba ta’aaatii mariiyachiisaa! Waan hawaasa Oromoo fayyaduu malu hubannoo dhabuurraa faayidichi nu darba jettanii kan yaaddan yoo ta’e hayyoota Gadaa fi Barnoota ammayyaa qaban mariisisa.
Dhumarratti abalutti maxxannee beekkamtii fi aangoo achii fi asii arganna jettanii hin bololi’naa,hin jomomo’inaa,hiin gatantarinaa,gurra hin qeessinaa, nyaaras hin haaddatinaa!
Bilisummaan mirqaanaan waan dhufte nutti fakkaatti bilisummaan ammaalleen fagoo jirti wareema hedduus nu gaafatti” kan Jaal Milkeessaa Gadaan jedhan hin dagatinaa! Wayyaanee kuffisuun waraana ijaaruufi hidhannoo addaatti ba’uu nu feesisa kun immoo alagaa irratti abdachuun utuu hin taane walirratti abdachuuni.
Barreeffamni ani isinii kaaye kun, alagaa jala isin yaasuuf miti lammii jala iisin yaasuuf malee,isin tarii waan harkaa fi biyya hambaa ilaaltanii haarka ormaa ammas ilaaluuf yoo saganteessitan animmo isa uummati barbaadu isinii dhaame Oromiyaa Walaba,bilisaa fi birmaduu taate arguu! Lakki akkuma Goobanaa Daaccee fi Kumsaa Morodaa darbitullee Jootee Tulluu Xoophiyyaaf hojjenna yoo jettan, hanga Hambis Kumsaa Morodaa fi Mardaasaa Jootee illee hin hanatinaan dhaamsakoo dhumaati!
Gatii “qalbii sareen” gabaa dhaqxe ulee dabalatti!
Garaacha dheedhii garaatti beekii!
About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne. - April 23, 2017	GUUBOO AFAAN OROMOO:Barattoota Yunibarsitii Jimmaa Hojii bareedaatti jiran! - April 21, 2017	DIINQA OROMOO: Dhimma Dubartootaa: Aadde Dinqinash Dheeressaa Kitilaa fi Beekan Gulummaa Irranaa’ Kutaa 1ffaa - April 21, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
← Waves of protests have gripped Ethiopia since last November.and Ethiopia’s state of emergency: both sides are determined to fight to the finish
Akka sabaatti kabajamneefi ulfaannee jiraachuuf dhaloota kana gootummaa hidhannoo wajjin haa barsiifnu! Gootummaan mi’eessituu fi gamteessituu kabachiiftu biyya tokkooti! Onkolooleessa 20/6410 ALO Noolee Buttaatiin →